Homeनेपाली निबन्धNepali Essay on "Anushasan ko Mahatva", "अनुशासन को महत्व " Complete Nepali Essay, Paragraph, Speech for Class 7, 8, 9, 10, 12 Exam in Nepali Language.
Hindi Gatha - Friday, February 12, 2021
अनुशासन को महत्व
Anushasan ko Mahatva
अनुशासन एक त्यस्तो गुण हो जसद्वारा व्यक्तिले आफ्ना भावनाहरू र व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सिक्छ। हाम्रो जीवनको हरेक मार्गमा अनुशासन अत्यन्त मूल्यवान छ। यसले व्यक्तिलाई जीवनमा प्रगति गर्न र सफलता प्राप्त गर्न प्रेरित गर्दछ। हामीले स्कूल, घर, कार्यालय, संस्था, कारखाना, खेल मैदान, रणभूमि वा अन्य स्थानमा अनुशासनको पालना गर्नुपर्दछ।
अनुशासनले हामीलाई परिपक्व,सोच्न कार्य गर्न र जिम्मेवार निर्णयहरू लिन सक्षम गर्दछ। यसले हामीलाई आत्म-संचालित, आत्म-नियन्त्रित र आत्म-निर्देशित व्यक्ति बनाउँछ। यसले हामीलाई जिम्मेवार र प्रधान व्यक्ति बनाउँछ। अनुशासनलले एक व्यक्तलाई सफल पार्नको लागि प्रेरित गर्न र उसको जीवनमा प्रगति गर्न ठूलो र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
अनुशासनले एक व्यक्तिको चरित्र निर्माण गर्दछ। अनुशासन बिना, एक व्यक्तिको जीवन सुस्त र निष्क्रिय हुनेछ।अनुशासनको पलना गर्ने व्यक्तिले समाजमा उच्च पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछ। अनुशासनको क्षेत्र ज्यादै फराकिलो पनि छ।घरपरिवारदेखि लिएर समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, वित्त आदि सबै क्षेत्रमा अनुशासन चाहिन्छ । अनुशासन सामाजिक जीवनको एक अत्यावश्यक गुण हो। यो बिना, समाज मा जीवन अराजक र दयनीय हुन्छ।
यसले चीजहरूलाई तपाईंको लागि चलाउन सजिलो बनाउँदछ अन्तत: तपाईंको जीवनमा सफलता ल्याउँछ। अनुशासनको क्षेत्र ज्यादै फराकिलो पनि छ।घरपरिवारदेखि लिएर समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, वित्त आदि सबै क्षेत्रमा अनुशासन चाहिन्छ। विद्यार्थीको जीवनमा अनुशासनको धेरैनै महत्त्व हुन्छ। विद्यार्थीलाई आकार दिने सबै गुणहरू मध्ये अनुशासन सबैभन्दा आधारभूत हुन्छ। अनुशासित विद्यार्थीलाई विद्यालयमा सबैले राम्रो नजरले हेर्छन। अनुशासनहीन बिद्यार्थीको पढाइ राम्रो हुन् सक्दैन भने अनुशासित बिद्यार्थीले पढाइमा अल्लेख्नीय सफलता हासिल गर्न सक्दछ।
अनुशासन मानिसका लागि अति आवश्यक छ। अनुशासन एक सीढ़ी हो जस द्वारा एक व्यक्तिले सफलता प्राप्त गर्दछ। यसले व्यक्तिलाई जीवनमा उसको लक्ष्यहरूमा ध्यान दिन मद्दत गर्दछ। अनुशासनले जीवनमा छिटै सफलता हासिल गर्न मदत गर्दछ। अनुशसानलेनै एउटा मानिसलाई आर्को मानिसको चरित्र, भावनाहरू र व्यवहारलाई चिनाउने काम गर्छ। अनुशासनले आफ्ना भावनाहरू र व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न मदत गर्दछ।
अनुशासनले हामीलाई आत्म-संचालित, आत्म-नियन्त्रित र आत्म-निर्देशित व्यक्ति बनाउँछ सबै । स्थानमा अनुशासित व्यक्तिलाई अनुशासनहीन व्यक्ति भन्दा बढी अवसरहरू प्राप्त हुन्छ। अनुशासित मानिस जहाँ जान्छ त्यहाँ सकारात्मक प्रभाव छोड्छ।
Wow it helped mealoy
Will u write about discipline in eng too
Covid mahamari ra baikalpik sikai nibandha ??
Good 😊 assy I like it 🤓
so nice it helped mealot
K xa 6:58 AM